I-LG K12 +: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-LG K12 +: I-brand entsha ye-smartphone esezantsi
I-LG isishiyile kwezi nyanga zokuqala zonyaka kunye neemodeli ezininzi ngaphakathi kuluhlu oluphakathi. I-K40 ne-K50 yimizekelo emibini yoku, nangona sikwanayo neminye njengeQ60. Ngoku, uphawu lwaseKorea lubonisa I-smartphone yayo entsha yoluhlu lokungena, i-LG K12 +. Ifowuni abayibonisileyo kumnyhadala waseBrazil.
Ngenye indlela, abasebenzisi abaninzi banokuyifumana le LG K12 + khumbuza uhlobo oluthile olunokuthantamisa lwe-LG K40. Kuba inoyilo olufanayo, ukongeza ekufikeni kunye nokuqinisekiswa kwezomkhosi kule meko. Ke sijamelene nemodeli eya kuba yeyona inqabileyo.
Njengoko sibonile kwezinye iifowuni ezininzi zophawu, iqhosha loMncedisi kaGoogle lazisiwe kule modeli. Ngokubanzi, inikezelwa njengefowuni ezalisekisa injongo yayo ngalo lonke ixesha, kodwa ngaphandle kobugcisa obukhulu. Into esiyibonayo kuyilo lwayo, ngaphandle kwenotshi yalo naluphi na uhlobo, into esele ingaqhelekanga kwimarike yangoku.
1 Ukucaciswa kwe-LG K12 +
Ukucaciswa kwe-LG K12 +
I-LG K12 + ikhethe isikrini kunye nezakhelo ezingaphezulu nezisezantsi ezichaziweyo. Ukhetho lweprosesa yinto ekwayinyanzelekileyo ukuba ivelise ingxelo. Kuba ngokuqinisekileyo abanye abasebenzisi abayi kuyithanda kakhulu. Oku kukucaciswa ngokupheleleyo kwefowuni entsha evela kuhlobo lwaseKorea:
Isikrini: 5.7-intshi TFT ngesisombululo HD +, 282 dpi
Inkqubo: I-MediaTek MT6762-engundoqo esibhozo ukuya kuthi ga kwi-2,0 GHz
Ukugcina ngaphakathi: I-32 GB (iyandiswa nge-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-2 TB)
Cámara trasera: 16 MP ngokuvula f / 2.0
Ikhamera yangaphambili8 MP ngokuvula f / 2.0 ngeFlash ye-LED
Ibhetri: I-3000 mAh
ConectividadI-LTE / 4G, iBluetooth 5.0, iWi-fi 802.11 a / b / g / n / ac, irediyo ye-FM, i-microUSB
abanye: Umfundi ongasemva weminwe, iqhosha le-Google Assistant, i-DTS-X, i-MIL-STD 810G yokumelana
Ubukhulu: 153,0 X 71,9 X 8,3 mm
U bunzima: Iigram ezili-150
Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yeempawu eziphambili kule LG K12 + bubukho besatifikethi sayo se-MIL-STD 810G. Ayisiyo fowuni yokuqala yohlobo lweKorea ukuba nayo. Ngapha koko, ixhaphake kakhulu kwizigaba zayo ezilula. Oko kuthetha ukuba le modeli inamandla okumelana namaqondo obushushu aphezulu, ukufuma, ukuphakama, imvula kunye nokuwa. Isiqinisekiso esihle kubasebenzisi abanomdla kuso.
Kwiikhamera azikho izinto ezininzi ezimangazayo ezivela kuhlobo. Inzwa enye kwicala ngalinye, kuzo zombini iimeko ezinombane. Ke sinokuba neefoto ezingcono kwimeko yokukhanya okuphantsi. Omnye umsebenzi esiwubona kakhulu kwii-smartphones zohlobo, nakwenye, liqhosha loMncedisi kaGoogle. I-LG yenye yeempawu ezenza i-AI isebenze kwii-smartphones zazo. Kule meko, bayayenza ngeli qhosha likuvumela ukuba uvule umncedisi, njengeqhosha le-Bixby kwi-Samsung.
Ngaphandle koko, isivamvo seminwe esingasemva siye saziswa kule LG K12 +. Kuyamangalisa ukuyibona, kuba uninzi lweempawu zithanda ukusika ezi nkcukacha kumanqanaba asezantsi. Kwibhetri, kusetyenziswa i-3.000 mAh. Ngokomgaqo kufanele ukuba yanele, ngokudibeneyo neMediaTek MT6762, iprosesa esinayo kuyo. Kodwa kunokubonwa kusetyenziso lwefowuni yonke imihla.
Okwangoku ukumiliselwa kwe-LG K12 + kuphela okuqinisekisiweyo eBrazil. Inkampani ayikhange ithethe nto malunga nokwaziswa okunokwenzeka kwezinye iimarike. Inokwenzeka ukuba iyakuphela ifikelela kwamanye amazwe, kodwa asinayo idatha okwangoku. Kukhutshwa ngokudityaniswa okukodwa kwe-RAM kunye nokugcinwa.
Ngokumalunga nexabiso, libekelwe ukuthengiswa ngexabiso le-1.119 yaseBrazil. Utshintsho lumalunga ne-272 euro, ke ayibizi ngexabiso kuluhlu lwayo, ukuthetha inyani. Ikhutshwa ngemibala eyahlukeneyo, enje ngwevu, luhlaza okwesibhakabhaka, nomnyama. Kuya kufuneka silinde kancinci ukubona ukuba iphehlelelwe eYurophu. Nangona ithe yasungulwa, ixabiso layo liya kuba phezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » LG » I-LG K12 +: I-brand entsha ye-smartphone esezantsi
I-Redmi 7 ifika eSpain ngokusemthethweni
UXiaomi patent ifowuni enotshi ezantsi